Idzo mota dze6 zviuru zve154 dzakabatana neIETT dzakagadzirirwa matai echando anotevedzera mutemo. Zvinosaswa zvakaongororwa uye zvisviniro zvakawedzerwa kumvura ye wiper. Magetsi ekupisa mumotokari akavezwa. Wick mune kupeta masisitimu uye [More ...]
Vashandi vekuchengetedzwa kwevakadzi vakatanga kushanda paMetrobus mutsara, iyo ine 44 zviteshi, uko vanhu vanopfuura mamirioni vanofamba zuva rega rega. Vakadzi vanoita mukati megadziriro yemitoro yakatsanangurwa muChengetedzo Yakavanzika Mutemo uye nemirairo inoenderana [More ...]
Metrobus maviri Akasangana paFikirtepe Metrobus Stop
Metrobus maviri Akasangana paFikirtepe Metrobus Stop; Fikirtepe metrobus yakamira mutsaona yakaitika manheru, inofungidzirwa kuti driver we metrobus achifambisa, nekuda kwemvura mumugwagwa unotsvedza wakaruza kudzora vhiri. [More ...]
Zano Rinonakidza reMetrobus Road
IETT's 2020 bhajeti kutaurirana kwakaitwa munaNovember zvikamu zveIMM Assembly. Sözcüsu uye nyanzvi yezve kuchengetedzeka kwemumigwagwa Dr.Suat Sarı akaita hurukuro kuongorora bhajeti. Metrobus mutsara uchatorwa mukutaura kwake [More ...]
IETT 2020 In Kukwirira Zvakanyanya Inowana 50 Metrobus Tool
IMM Council yakabvumidza iyo 2 Year Budget yeGeneral Directorate yeIETT ye980 mabhiriyoni 2020 mamirioni TL. İETT General Manager Hamdi Alper Kolukısa akataura kuti mu2020, vaizotenga yakakwira 50 [More ...]
Metrobus Inomira Signs Inomirira Nguva YeNguva
Metrobus inomira panguva yekumirira inotanga; IETT, Metbbus inomira yakatanga kuisa zviratidzo kuti vagari vamirire munzvimbo chaiyo. Zincirlikuyu uye Şirinevler nhepfenyuro yakatangwa mukushandisa, ichapararira kune zviteshi zvese nekufamba kwenguva. Metrobus Line [More ...]
Tsananguro yeiye Anoshamisa Elevator paMetrobus Station
Istanbul Metropolitan Municipality (IMM) Kucukcekmece Beşyol Metrobus Mira nekuda kwekusimudzira hakufambisi nekuda kwenguva yakaoma yevakaremara DHA'nın ine chinyorwa chakanyorwa panhau yakagadzirwa. Chirevo asansör Kusimudza panomira mumubvunzo [More ...]
Foni Kushandiswa kweIETT uye Yavasaruzhinji Bhazi Drivers Inodekara
IETT General Directorate yeMabhazi mune masimba anotangwa nevatyairi vemabhazi, 2019 pagore iri kuenda kutaura nezviuru zvisaririra pane 294 chauffeur yakaonekwa. Istanbul Electric Tram neTanaki Works (IETT) [More ...]
IETT Psychologists Vanotarisa Metrobus Drivers
IETT Psychologists Akatarisa Metrobus Drivers; Metrobus madhiraivha anoshanda Istanbul vagari 7 zuva 24 maawa aive nevashanyi akakosha munzvimbo dzekuzorora. IETT vepfungwa vakarara pamunda, vakapedza nguva vachitaura nevatyairi. vanachiremba, [More ...]
Istanbul Yakagadzirira Chando neBEUS System
Zviuru zve6 zviuru zve882 vashandi uye zviuru zve373 mota zvichashanda kudzivirira kukanganisa kwehupenyu muIstanbul. 60 yakakomba nzvimbo yeguta ichave ichitariswa pamwe neye BEUS system, pre-icing matanho achatorwa kudzivirira tsaona. Istanbul [More ...]
Hechino chitsva Metrobus ..! Ekrem İmamoğlu Kuedzwa
Heano Heya Metrobus ..! Ekrem İmamoğlu Kuedzwa; İBB Mutungamiri Ekrem İmamoğlu vakatora chikamu muedzo yekutyaira yemadhodhi gadzira metrobus mota. İmamoğlu, anga asvika panomira 29 stall, [More ...]
Istanbul Metrobus Maawa: Mune idzi nhau nezveMetrobus nguva uye kumira, iwe unogona zvakare kuona metrobus mepu, ndiyo iri padyo metrobus mira kuenda kwauri kuenda uye metrobus kumisa kwaunoda kuenda. [More ...]
Metrobus Inomira Mepu: Unogona kuwona ese eMetrobus akamira pane imwe mepu, ona kuti ndeipi metrobus station iri padyo nepauri kuenda uye kureba kune metrobus mira, iyo nzvimbo yemira. [More ...]
New Metrobus Motokari dzeIstanbul Showcased
Istanbul Metropolitan Municipality iri kuunza mota nyowani dzinofanira kugadzirwa muBursa kune metrobus system, inova imwe yemotokari dzinoshandiswa zvakanyanya ekufambisa yeguta. New metrobuses parizvino iri kuyedzwa inoenderera mberi kugadzirwa kana ichikoshesa vagari [More ...]